हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका मेयर राईको काठमाडौंमा सक्रियता - Tesro Ankha
हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका मेयर राईको काठमाडौंमा सक्रियता
दुर्छिम (खोटाङ) । हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाका प्रमुख इबन राई काठमाडौंमा छन् । केही दिनयता काठमाडौंमा रहेका प्रमुख राईको दिनचर्या कसरी बितेको होला ? सामाजिक सञ्जालमा अभ्यस्तलाई जानकारी होला । तर, नगरका भुँइमान्छेलाई थाहा होला के ?
लामो खडेरीपछिको अविरल वर्षाले हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकावासी प्रभावित भए । नगरको अभिभावकका हिसाबले चार दिन लगातार नगरका विभिन्न वडावासीको घरदैलो पुगी निकट भविष्यमै राहत वितरण गर्ने उनले गुलियो वचन दिए । लगत्तै काठमाडौं हिँडे ।
नगरवासीको पीडामा मलहम लगाउन राहत माग्दै सिंहदरबार पसे । विभिन्न मन्त्रालय पुगेर खाद्यान्न, खानेपानी व्यवस्थापन, सडक मर्मतलगायतको माग गरे । गर्दै छन् । अविरल वर्षाले नगरपालिकाका ११ वटै वडा जोड्ने सडक अवरुद्ध भएपछि खाद्यसामग्रीलगायत ढुवानी गर्ने वैकल्पिक मार्ग नहुँदा खाद्यान्न संकट आइलाग्नु अस्वाभाविक होइन । अविरह वर्षाले कतिपय ठाउँको खानेपानीको मुहान बगाएको छ । त्यसो भएकाले नगरवासीको विपत सुनाउँदै राहतका लागि सिंहदरबार पुगेर बिन्ती बिसाउन उनी पछि परेनन् । उनलाई युवा संघ सहसंयोजक रमेश पौडेल, नेकपा हलेसी तुवाचुङ नगर कमिटी अध्यक्ष सुरेन्द्र राईलगायतले साथ दिए ।
नगर प्रमुख राई, युवा संघ सहसंयोजक पौडेल, नेकपा हलेसी तुवाचुङ नगर कमिटी अध्यक्ष राईलगायतले गृह मन्त्रालय, भौतिक योजना तथा पूर्वाधार मन्त्रालय, स्थानीय विकास मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय पुगेर सहयोगको याचना गरेका थिए ।
नगरवासीको सहयोगका लागि सिंहदबार पसेपछि बचेको समय पनि नगरकै हितका लागि खर्चेका छन् । फलस्वरूप खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका र काठमाडौंको दक्षिणकाली नगरपालिकाबीच भगिनी सम्बन्ध कायम गर्न भ्याए । पारस्परिक सम्बन्ध स्थापित गर्दै धार्मिक पर्यटन प्रवद्र्धन गरी आर्थिक अभिवृद्धि गर्ने अभिप्रायसहित गत साउन १९ गते दुई नगरपालिकाबीच भगिनी सम्बन्ध गाँसिएको थियो ।
हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका मेयर इबन राई र दक्षिणकाली नगरपालिकाका मेयर मोहन बस्नेतले भगिनी सम्बन्धका लागि हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका–४ वडाध्यक्ष किशोर बस्नेत, वडा नम्बर ५ का वडाध्यक्ष रमेश तिवारीलाई साक्षी राखेर १२ बुँदे समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
२०७६ श्रावण २३ ०६:२३